တရုတ်မယား – Eleven Media Group
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်မယား လုပ်ပါက မြန်မာငွေကျပ် ၁၅ သိန်းရမည် ပြောဆို စည်းရုံးသည့် အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
Posted on August 20, 2018 August 21, 2018 by သက်ထွန်းအောင်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်မယား လုပ်ပါက မြန်မာငွေကျပ် ၁၅ သိန်းရမည်ဟု ပြောဆို စည်းရုံးသည့် အမျိုးသမီးအား နယ်မြေရဲစခန်း (အမှတ်-၄) မှ အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီး အရေးယူထားကြောင်း သြဂုတ် ၂၀ ရက်က သတင်းရရှိသည်။
လူကုန်တားတပ်ဖွဲ့စု ၁၁ သို့ သြဂုတ် ၁၉ ရက် ၁၀ နာရီက အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ညောင်ကွဲရပ်ကွက် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ မိန်းကလေး (မှီခို) တို့ သုံးဦးသည် ရောက်ရှိလာပြီး ၂၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး၏ လင်ညီမတော်သူ ၄၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး (စက်သုံးဆီရောင်းသူ တောင်သာမြို့နယ်နေသူ) က တရုတ်မယား လုပ်ပါက မြန်မာငွေကျပ် ၁၅ သိန်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လိုက်မည်ဆိုပါက မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ညောင်ကွဲရပ်ကွက် ၁၂ လမ်းထိပ် တာပေါင်သို့ လာရောက်ရန် စည်းရုံး ပြောဆိုသောကြောင့် ၎င်းမှာ တရုတ်ပြည်သို့ လိုက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းချက်များအရ သိရသည်။
ထို့နောက် လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့က ၂၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး၏ ဖုန်းဖြင့် အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးထံသို့ ဆက်သွယ်စေခဲ့ပြီး ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ်အား မေးမြန်းစေခဲ့ရာ တရုတ်မယား လုပ်ပါက မြန်မာငွေကျပ် ၁၅ သိန်းရမည်၊ ချိန်းဆိုသည့် နေရာသို့ ထွက်လာခဲ့ရန် ပြောဆို စည်းရုံးနေသည်ကို ကြားသိရသောကြောင့် ၎င်းနေရာသို့ လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့မှ သွားရောက်ခဲ့ရာ ၄၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးအား တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် လူကုန်တားတပ်ဖွဲ့ စုရုံးသို့ ခေါ်ဆောင် စစ်မေးရာ တရုတ်မယား လုပ်ရန်နှင့် တရုတ်ပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားရန် ပြောဆို စည်းရုံးနေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် သြဂုတ် ၂၀ ရက် မန္တလေး-မူဆယ် ကားလက်မှတ် ဖြတ်ပေးရန် ကားဂိတ်သို့လည်း ဆက်သွယ်ထားကြောင်း ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်မြေရဲစခန်း အမှတ် (၄) မှ ၄၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးအား (ပ) ၃၄၄/၂၀၁၈၊ လူကုန်တားအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄/၃၂ အရ အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted in CrimeTagged တရုတ်မယားLeaveaComment on တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်မယား လုပ်ပါက မြန်မာငွေကျပ် ၁၅ သိန်းရမည် ပြောဆို စည်းရုံးသည့် အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ရန်ကုန်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီးနောက် ရှစ်လကြာတွင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
Posted on May 16, 2018 May 16, 2018 by Eleven Media Group
ရန်ကုန်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီးနောက် ရှစ်လကြာတွင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မှု မေ ၁၅ ရက်က အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မေ ၁၅ ရက်တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ရွှေဟင်္သာ(၄)လမ်းတွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၁၇ နှစ်ရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရ၍ မ… အား စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့သို့ စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ မ…. သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (ရက်မမှတ်မိ) ဖခင်နှင့်အတူ နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် သူငယ်ချင်း မစုစု၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးသီသီခိုင် ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ ဒေါ်အေးသီသီခိုင်က မ…အား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတွင် မြန်မာမိန်းကလေး အလုပ်သမားများ လိုအပ်နေကြောင်း၊ တစ်လလျှင် မြန်မာငွေကျပ် လေး၊ ငါးသိန်းခန့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်လုပ်အားခအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း ၂၀ အားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုစည်းရုံးသည်ကို ယုံကြည်သဘောတူခဲ့၍ မူဆယ်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့် မူဆယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်ပေါက်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ခေါင်မြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ကာ ရွှေလီမြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေလီမြို့ ပလောင်လူမျိုးအိမ်တွင် ဒေါ်အေးသီသီခိုင်မှ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး မ….နှင့် ဒေါ်အေးသီသီခိုင်၏ သမီးဖြစ်သူနှစ်ဦးတို့အား အမည်မသိ တရုတ်လူမျိုးက ဟန်နန်ပြည်နယ်၊ ဗီနန်ဂျာဘတ်မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး မ….. အား ၎င်းမြို့ရှိ တရုတ်လူမျိုး ကိုညီပွားဆိုသူထံ တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သည်။
မ… မှာ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁၃၀၀၀၀ ဖြင့် ကိုညီပွားထံ ရောင်းစားခဲ့ကြောင်း နောက်ပိုင်းမှ သိရှိခဲ့ကြောင်း၊ မ…. သည် ကိုညီပွား ထံတွင် တရုတ်ဇနီးအဖြစ် ရှစ်လခန့် ပေါင်းသင်းခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်းတို့မိသားစုမရှိခိုက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ် ၃ ရက်တွင် ထွက်ပြေးခဲ့ရာ ဖူကျင်းပြည်နယ် ၀င်းကျိုမြို့ရှိ တာဝန်ရှိသူများထံ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၀င်းကျိုမြို့ရှိ တာဝန်ရှိသူများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မူဆယ်လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့သို့ မေ ၉ ရက်တွင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် မူဆယ်လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ မှန်လုံယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာ မေ ၁၀ ရက်တွင် ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဒေါ်အေးသီသီခိုင်၊ အမည်မသိ ပလောင်အမျိုးသမီးနှင့် တရုတ်အမျိုးသား သုံးဦးတို့ကို တောင်ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၉၆၀/၂၁၀၈၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးပုဒ်မ၂၄/ ၃၂ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ စုံစမ်းအရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged တရုတ်မယားLeaveaComment on ရန်ကုန်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီးနောက် ရှစ်လကြာတွင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး
ကာဗာနီနှင့် ပြဿနာမရှိကြောင်း PSG အသင်းနည်းပြ တူဟယ်လ် ပြောကြား
အဝေးကွင်းမှာ ဘရိုက်တန်ကို အနိုင်ကစားပြီး နိုင်ပွဲပြန်ရခဲ့တဲ့ စပါး
အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း ဘာစီလိုနာအသင်းနည်းပြ ဗယ်လ်ဗာဒီ ဆို